Njirimara na ịdị mkpa nke a poljé | Netwọk Mgbasa Ozi
Gịnị bụ poljé
N'ime ihe anyị na-akpọ karst enyemaka anyị nwere ụfọdụ usoro na-adọrọ mmasị ịmara. Taa, anyị ga-ekwu maka ya polje. Ọ bụ nnukwu olulu mmiri nke na-adịkarị na ọdịdị nke ndagwurugwu elongated ma nwee contours na-adịghị mma. A na-akpụ ntọala nke massif site karst nkume.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile nke poljé na mkpa ọ nwere maka geomorphology nke mbara ala.
1 Gịnị bụ poljé
2 Mkpa sedimenti na poljé
3 Poljé nke Zafarraya
Poljé a bụ nnukwu ego nke na-etolite ndagwurugwu na ala ala ya dị larịị. O mejuputara okwute karst ma nwekwa uzo di elu ebe nkume nzu nzu di kari. Inwe ike iwepu mmiri na-agbakọta n'ihi ọdịda, poljé na-enwekarị sump. Mmiri a na - esikarị n’etiti mmiri gafere site na ebe a na - ekpochapu mmiri ma na - ebute mmiri dị n’ime ala. N'ihi mmiri a na-asọba n'ime ụzọ dị n'okpuru ala, usoro dị ka stalactites na stalagmites.
Nhazi a nwere ike iju mmiri nwa oge ma ọ bụ kpamkpam dabere na ọchịchị mmiri ozuzo. Ọ bụrụ na ide mmiri na-adịgide ya, ọ nwere ike ịbụ ọdọ ebe ọ bụ na mmiri a na-akwakọba karịa ikike drainage nke nsị na nri nke nkume limestone. Nke a bụ mgbe ọkwa mmiri na-arị elu ruo n'ókè nke ịmalite ọdọ mmiri.
Isi nke poljé dị larịị ma jupụta ụrọ sitere na mkpochapu limestone. A maara ụrọ a site na aha terra rossa. Ekele maka ụdị ụrọ a, enwere ike ịsị na ndagwurugwu ndị etolite site ida nke poljé na-eme nri nke ọma. Ala ndị a na-enweta ụdị ihe oriri niile na-ezukọ n'otu ebe maka ịda mbà n'obi.
Mkpa sedimenti na poljé
Mmetụta bụ usoro nke eburu mmiri ma ọ bụ ikuku na-ebugharị ihe siri ike ma debe ya na ala mmiri, osimiri ma ọ bụ ọwa mmiri. Nọmalị ndị a sedimenti ịkpali site na ike ndọda. Dabere na nha ha, ha nwere ike kwụsịtụ ma ọ bụ gbanye n'ime mmiri. Enwere ike ịdọrọ nke kachasị sie ike mana ha choro okwukwo mmiri di ike ma obu oke ikuku.
N'ihe banyere sedimenti ndị eburu n'elu ala, anyị nwere ike ikwu na e nwere ụdị njem atọ. Na-arị arị Ọ bụ ụdị nke njem nke ihe kachasị gwụ elu na-agagharị. Mgbe ahụ anyị nwere nnu. Ọ bụ usoro njem site na nke ahụrụ ahụ na-eme ka ọ wụpụ ntakịrị n'ihi ike nke ikuku ma ọ bụ mmiri dị ugbu a. Maka obere sedimenti bụ nkwusioru n'ime mmiri na ikuku na mgbasa na naanị mmiri. Anyị na-ahụkwa flotation n'ime sedimenti ndị ahụ dị ntakịrị karịa mmiri. Dịka ọmụmaatụ, mpempe osisi ma ọ bụ alaka nwere ike ise n'elu mmiri nke osimiri ma buru ya ruo n'ọnụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmiri iyi ọ bụla n'agbanyeghị agbanye mmiri ya, ọsọ na ọdịdị ya nwere ikike ibufe ihe nkwusioru siri ike. Ihe a, nke dị na nkwusioru, jiri nwayọọ nwayọọ na-ebute ike nke ike ndọda ruo mgbe ọ ruru ala. Ọ bụrụ na ọwa mmiri ahụ na-adị ngwa ngwa, ọ nwere ike inye aka na mbuze n'akụkụ mmiri ma ọ bụ ala nke ọwa ahụ. Mgbe mmiri mmiri na-ebelata, sedimenti niile nke gbagoro na ala ma nwee nnukwu ọmụmụ na-abịa n'elu. N'ihi ya, ala nke poljé na-enwekarị ikike dị ukwuu ịzụlite.
A na-emepụta ọtụtụ ihe ndagwurugwu site na ike ndọda. Ọ bụ ezie na ihe ịtụnanya kachasị ebupụta na mpaghara kachasị elu nke ụwa anyị, dịka ugwu, na mpaghara kachasị daa nkụda mmụọ, enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe ndozi. Oghere ndị a nke ebelata ebe mmiri na-agbakọ n'ọtụtụ buru ibu ka a na-akpọ efere sedimentary.
Poljé nke Zafarraya
Otu n'ime poljé kachasị anyị nso na ebe anyị nwere ike ịchọpụta ihe niile anyị kwuru bụ na poljé de Zafarraya. Ọ dị na otu n'ime ihe kachasị mkpa endorheic depressions nke karst sitere na Iberian Peninsula. Ihu igwe ebe bọọdụ a guzobere bụ mpaghara kọntinent dịkarịsịrị ala. N'ebe ndị a, mmiri ozuzo kwa afọ dị ihe dịka 1000 mm. Mgbe ụfọdụ, ọ na - ebute ide mmiri site na ike otu ihe ahụ. Ala ndị ahụ bụ nke ụdị fluvisol calcareous na enwere nnukwu ọrụ ugbo na-agba mmiri.
Nnukwu ikike o nwere iji zụlite ebe ndị a bụ n'ihi ịdọrọ na nchịkọta nke ihe mmiri na-akpata site na ịda mbà n'obi na ụzọ mmiri. Oke nke poljé de Zafarraya bụ Sierra Tejeda na Sierra Gorda. N'ime obodo a enwere akara nkewapụrụ mpaghara ndị dị na Malaga na Granada ndị dị n'akụkụ mpaghara Axarquía. N'ihi nri ala nke poljé guzobere, a pụkwara iji ọrụ anụ ụlọ dịka isi akụ.
Na mpaghara a anyị hụrụ mbara ala Zafarraya, nke amara maka ịbụ nnukwu ndagwurugwu nke ihe dị ka kilomita iri. Ma mmiri mmiri ozuzo ma nke osimiri chịkọtara bụ nke Almijara, Tejeda na Alhama Natural Park. Mmiri mmiri dị na otu n'ime nnukwu mmiri mmiri a maara nke ọma dị na ala Loja na Marchamonas. Mgbe mmiri rutere na mkpọmkpọ ebe a, ọ na-efu n’ime ala. A na-eche na ekele maka oke mmiri na isi iyi ndị a na-ahụ n'obodo nke Loja bụ n'ihi.
A sị na ọ bụghị maka olulu mmiri a, ala ahụ dum ga-anọgide na mmiri, na-eme nnukwu ọdọ mmiri. N'oge ụfọdụ, mgbe mmiri ozuzo kariri ike nke sinks iji hapụ mmiri, obere ọdọ mmiri na-etolite. Nchikota mmiri na iru mmiri nke bu nnukwu ihe di nma maka iwulite ala di nma maka oru ugbo. N'ihi ogbawanye nke ọrụ ugbo na mpaghara ndị a, okpokoro mmiri na-agwụsị site n'iji oke mmiri eme ihe.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe poljé bụ na mkpa ọ dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Gịnị bụ poljé
Oke Osimiri Barents
Biography nke Anaximander